October 2017 – Page 2 – Allpuntlander.com
October 18, 2017 admin1
Waxan jeclaystay inaan qodob-qodob u dul istaago dhaliisha Xil. Mahad Salaad ee aan waqtigeeda la joogin qaarkeedna aan ka turjumaynin xaqiiqda jirta laguna marin habaabinayo gurmadka ay shacabka Soomaaliyeed iyo dalalka aan saxiibka nahay la garab istaagayaan dhibanayaashii ay ku habsatay masiibadii ka dhacday Sabtidii hore Isgoyska Soobe. Soomaalidu waxay ku maah-maahdaa “Qadiyad walba xiligeeda laga hadlaa” qofka waxaa fiican inuu misaan saaro marxaladaha lagu jiro ka hor inta uusan wax amaanin ama uusan dhaliilin, waxaa jirta xili laguu dhago raaricinayo, lagugu amaani, ama lagaa abaal marin hadii aad soo jeediso dhaliil, balse…
Sawirro: Dowladda Puntland oo gurmad u dirtay Muqdisho
Dowladda Puntland ayaa gurmadkii ugu horreeyay gaarsiineysa magaalada Muqdisho, dawooyin iyo agab caafimaad oo ay dhakhaatir waheliyaan ayaa diyaaradi ka qaaday Garoowe. Wasiirka Caafimaadka Puntland Dr Cabdinaasir Cuuke iyo guddigii arrintaan loo xil saaray ayaa deeqdan garsiinaya magaalada Muqdisho. Dowladda Puntland waxay noqonaysaa dowlad gobolleedkii ugu horreeyay oo gurmad ay diyaarad sido geynaya Muqdisho, kaddib qarax boqollaal rayid u badan ay ku dhinteen oo ka dhacay 14 bishan isgoyska mashqulka badnaa ee Zoobe. Daawo sawirrada Shire Garee Wararkeena
Banaanbaxyo Waaweyn Oo Weli Ka Socda Muqdisho+Sawirro
Maanta Muqdisho waa ay ka duwan tahay Maalmihii la soo dhaafay waxaa inta badan xiran Goobaha Ganacsiga iyo Wadooyinka qaar, waayo waxaa ka jira Dibadbaxyo Waaweyn kuwaas oo Magaalada laga dareemay. Boqolaal ka mid ah Shacabka Muqdisho ayaa isugu soo baxay Wadooyinka Waaweyn ee Magaalada kuwaas oo aad uga xun falkii lagu xasuuqay Boqolaalka shacabka ah ee Sabtidii ka dhacay Magaalada muqdisho. Shacabka oo aan looga baran hadalada qaarkood ayaa Maanta waxa ay ku dhawaqayeen Erayo ay ka mid ahaayeen dooni meyno Al-Shabaab iyo Erayo kale. Dadka qaarkood waxa ay…
Dhagayso: Madaxweynaha Puntland oo kulan aan caadi ahayn la qaatay Golaha Wasiirada Puntland & Gurmad Muqdisho loo diray (Sawirro)
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 17 October 2017 kulan aan caadi ahayn la qaatay golaha wasiirada Puntland, kulankaas oo looga arrinsanayey qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14 october 2017 iyo sidii gurmad deg deg ah loo gaadhsiin lahaa dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay. Madaxweynaha Dawladda Puntland oo ka gadaal shirkaasi warbaahinta la hadlay ayaa marlabaad uga tacsiyeeyey shacabka Soomaaliyeed, eheladii, qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxeen dhammaan dadkii ku nafwaayey qaraxaasi, waxaana Madaxweynuhu uu Alle uga baryey inuu u naxariisto denbigoodana dhaafo samir iyo iimaana Alle…
(DAAWO SAWIRADA) Maraykanka, Qatar oo qalab Caafimaad ka soo dejiyey garoonka Aadan cadde
Dayuurado milateri oo ka kala socda dowladaha Maraykanka iyo Qatar ayaa goor dhow ka soo degay garoonka Aadan cadde ee magalada Muqdisho. Labada dayuuradood ayaa siday shixnado isugu jira dawooyin iyo qalab Caafimaad oo loogu talo in lagula tacaalo boqolaalka qof ee ku dhaawacmay qaraxii maalmo ka hor ka dhacay Muqdisho kuwaasoo daadsan isbitaalada caasimada qaarkood. Dayuurad ka timid alka Qatar oo ah mid aad u weyn ayaa la filayaa iney horey u sii qaado dadka dhaawacyada halista ah qaba si dalkaas loohu dawaeeyo. Sidoo kale labo dayuuradood oo ka…
Dhageyso: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay maalin bannaanbax & tacsi ah
Guddoomiyaha Gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay maalin cusub oo tacsi loo sameynayo dadkii ku laayay Qaraxii Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Guddoomiye Taabit Cabdi Axmed ayaa ugu baaqay dadka Muqdisho inay isu soo baxaan Arbacadda maalin tacsi qaran loo sameynayo dadkii ku dhintay Qaraxa, wuxuuna intaas ku daray qof waliba looga baahan yahay inuu kasoo qeyb galo. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ka codsaday in magaalada socod lagu maro oo la muujiyo in qarax dambe aanu magaaladan ka dhicin, wuxuuna berri u cayimay maalin bannaanbax iyo tacsi oo lagu diidan yahay…
Sawirro Cusub :- Gudoonka Cusub ee waxbarashada gobolka Mudug iyo Kan degmada Gaalkacyo oo xilalkooda lawareegay.
Munaasabad balaaran ka dhacday hoolka Shirarka Iskuulk Cumar Samatar ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa xilalka kula kala wareegay gudoonka cusub waxbarashada gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo. Xilwareejinta waxaa goob joog ahaa Wasiirka wasaarada deegaanka dowlada Puntland,Madaxweyne kuxigeenkii hore ee dowlada Puntland Maxamed Cali Yuusuf (Gaagaab), Gudoomiyaha gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo Nabadoono, macalimiin iyo maamulaayasha iskuulaadka. Maxamed Shufeer ayaa waxa uu xilkii uu kusime ahaanta uhayay uu kuwareejiyay gudoonka cusub ee waxbarashada degmada Gaalkacyo Cali cabdi Sahal isagoona sheegay in uu yahay nin ka soobixi kara xilkaas. Dhanka kale…
Daawo Sawirada : Wariyaasha Koonfurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo oo Heshiis ku saabsan ka Wada Shaqaynta Nabada Gobalka ku Wada Gaaray Gaalkacyo
October 14, 2017 October 14, 2017 admin1
allpuntlander Gaaalkacyo :Wariyaasha Koonfurta iyo Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ayaa Magalada Gaalkacyo ku Gaaray heshiis Hordhac ah waxana Heshiiskaasi uu ka Micno yahay Wada Shaqayn dhax Mari Doonta Wariyaasha Koonfurta iyo Waqopoyiga Magalada Gaalkacyog Gundhiga Heshiiskan aya Waxa uu yahay ka wad Shaqaynta Nabada Gobalka Mudg kadib Markii Saxaafada Gobalka Mudug lagu Edeyay in ay Qayb ka yihiin Horinta Colaada Gobalka Mudug Heshiiska waxa qayb ka ahaa Wariyaasha Labada dhinac iyo Sidoo kale Agaasimayaal ka Socday Dhawr idaacadood oo ku Yaala Koonfurta iyo Waqooyiga magaalada Gaalkacyo Gudoomiye ku xigeenka Ururka Saxafiyiinta…
DHAGEYSI XASAASI AH: Dawladda PL oo si kulul uga hadlay xarig loo geystay xubno mucaarad ah oo lagu xiray caasumada Puntland
Dawladda Puntland ayaa faahfaahin ka bixisay xariga loo geystay 4 kamid ah koox sheegatay in ay yihiin Ururka Badbaadinta Puntland, kaas oo dhawaanihii ugu dambeeyey waday cambaareyn iyo mucaardid ay ku hayeen waxqabadka dawladda. Gudoomiyaha gobalka Nugaal Col, Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa sheegay in ay xireen kooxo doonaya in ay falal amaan-darro iyo Urur sharci darro ahaa kaga dhawaaqay magaalada Garoowe. Col, Faraweyne ayaa sheegay in kooxahan cadaaladda la horkeeni doono, taas oo ay ku wajahayaan wixii ay ka helaan sharciga. Wareysi uu siiyey Idaacada VOA-da ayuu faahfaahin uga bixiyey…